दलबीच विवाद भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकिए - आयो खबर
दलबीच विवाद भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकिए
२०७४ आश्विन २६ प्रकाशित ०३:३१
असोज २६, काठमाडौं । विधेयकको प्रस्तावनादेखि सम्बन्धनको प्रक्रियासम्म राजनीतिक दलबीच विवाद भएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मै रोकिएको छ । संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रतिवेदनसहितको विधेयक समितिले संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि पारित भई नसकेको बताए । गौतमले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्था छ तर, विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ समितिले प्रतिवेदन तयार पारी दसैँअघि नै संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विवादका कारण विधेयक पारित हुन सकेको छैन । गोरखापत्र
प्रकाशित | २०७४ आश्विन २६ प्रकाशित ०३:३१
मन्त्री फेरिँदै, फालिने र भित्रिनेमा को–को छन ?
स्पेनिस ला लिगा : एट्लेटिको मड्रिड स्पान्योलसँग पराजित
‘गोरे’ सहित तीन जनाको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने
‘नौ डाँडा पारी’ सार्वजनिक